Mon Petit Avatar: Saturday Night Walking Street
When we arrived to Chiang Rai, the day was almost over; we all were hungry and tired. So we headed to food stalls, which happened to be near the Saturday night walking street. We did eat quickly (it was like racing against time) so as to haveafew moments to look around the walking street, where we foundalot of clothes, crafts, food, local band and etc. Sure enough, everyone dispersed among different stores and 60 minutes seemed too few to wander off. We didn’t think much about the things we saw, the passer-by we met that time, and now when thinking back, everything there was so cheap, 100% cheaper than Bangkok and kind of regret for not buyingalot of things due to space and time. May be I was not in mood for shopping that day!!!
According to this news, individuals working in Thailand can deduct the income taxes, which is coming by the way, with donations (not exceeding 10% of annual taxable income) to Japan.
Posted by Mon Petit Avatar at 7:41 PM
အဲ့လို ညဈေးတန်းတွေ လျှောက်လည်ရတာ
၀ါသနာပါတယ် ..ဒါနဲ့ နေရာအနှံ့ ရောက်တယ်နော်
လေယာဉ်မယ်? အရပ်မမှီဘူး Baby ရေ
ပွဲဈေးလျှောက်ချင်တယ်.. မုန့်တွေ လျှောက်ဝယ်စားချင်တယ်.. :)
မဲဆောက် ညဈေးလားလို့ ထင်မိသွားတာ ထိုင်းက ညဈေးလေးတွေက အစားသောက်လည်း စုံတယ် ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ် ။
ခုမှ ရောက်ဖြစ်တယ် ချင်းမိုင်ကနေ ချင်းရိုင်ကို တရက်ခရီး မို့လို့ အမတို့ မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး...နောက်တခေါက် အရောက်သွားဦးမယ် သဘောကျတယ် လူတွေကိုရော အစားအသောက်တွေကိုပါ.... လင့်ခ်ယူသွားပါတယ် ညီမရေ....:)
Les marchés de nuit en plein air me manquent..! Ici, Il yades marchés de Noël de ce genre mais ce n'est pas la même atmosphère. Merci pour les photos qui m'enmènent dans mon enfance.
Sunny, Mg Myo, Ama Chit, Thank you all for visiting my blog.
C'est vrai, l'atmosphère n'est pas la même! Ko NLT!
Chiang Rai ရောက်ဖူးတယ်။ အဲဒီကနေမှ ချင်းမိုင်၊မယ်ဆိုင်၊ Mae Salong နဲ့ Ban Thoed Thai တို့ကိုဆက်သွားခဲ့တာ။
ထိုင်းမြောက်ပိုင်းက အစားအသောက်ကို တောင်ပိုင်းကထက် ပိုသဘောကျတယ်။ မြောက်ပိုင်းမှာ ပဲပုပ်နဲ့ငရုတ်သီးရောကြော် ဗူးလေးတွေတောင် ၀ယ်လို့ရခဲ့တယ်။ တောင်ပိုင်းက ယိုးဒယားအသိကို ပြတော့ သူကြားပဲကြားဖူးတယ် မစားဖူးဘူးတဲ့။
တို့လဲမစားဖူးဘူး စူးနွယ်လေး။ အခုပဲအိမ်ပြန်တုံးကဝယ်လာ တာတွေ့လို့ပျော်နေတာ။ရေနွေးနဲ့ မြည်းမလို့။
oh... very nice photo of street market. want to visit. Thank you!!